Kutamba neGimp: Kugadzira rakapenga bhomba | Kubva kuLinux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Chigadzirwa
Nhasi kugadzirisa mapikicha chinhu icho chero munhu anogona uye chaanofanira kuita. Zvakanaka kana iwe ukashandisa Windows uye senge Photoshop, sekunge iwe uchishandisa smartphone uye uine application yacho senge Momentcam, paLinux tinogona zvakare kuita zvinhu zvedu tichishandisa Gimp.
Ini pachangu, ini handisi dhizaini dhizaini, ndoda, ndinoita zvishoma uye zvakakosha neGimp, hongu, ndechimwe chekutanga kunyorera kwandinoisa pane yangu Linux. Ini ndinoisa akawanda ekushandisa mune imwechete tambo (raira) mune terminal, nzira iri nyore kwazvo ichienzaniswa neyeinetesa uye inogumbura kurodha pasi uye yekumisikidza maitiro eiyo Windows shamwari, Photoshop. MuLinux kuisa zvinoshandiswa zviri nyore kupfuura iwe zvaunofunga, zvakafanana nekuisa maapplication mu Android, kana iwe ukashandisa Linux kurodha pasi uye nekuisa iyo software (Gimp) kuburikidza neyekushandisa graphical kana chinongedzo, uine mashoma mashoma kudzvanya zvichave zvakakwana, pane Android kuburikidza neapp iwe yaunokwanisa download MomentCam , Iko kufungidzira iwe haudi kubhadhara iyo mamirioni emadhora Photoshop rezinesi iyo inodhura.
Zvakanaka kupinda munyaya yacho, Hyuuga_Neji inotsanangura maitiro ekugadzirisa pikicha uye kushandura munhu akafuta zvakanyanya kuita bhomba rinoshamisira, chimwe chakadai.
Iyi posvo ichave yakakumikidzwa kune vese avo vanonzwa chubby uye vangade aesthetically kudzokorora yavo chimiro
1 Sumo pfupi
2 Kugadzira iro Rinosimudzira Bhomba
Chinhu chekutanga kuziva ndechekuti isu tiri kuzoshandisa firita (iyo inouya nekumira) neGIMP, zita rayo nderekuti: iWarp kana unogona kuti "Inopindirana deformation". Iyi firita inotibvumira kugadzirisa zvikamu zvemifananidzo uye mukati mayo sarudzo yatinayo:
Kufamba Inobvumira kufambisa imwe huwandu hwepikisheni
Kukura Kudza chifananidzo
Kurwisana neChipupuriro Inoita whirlpool munzira iyoyo
Bvisa Bvisa kugadzirisa
Shinya Shinyisa mufananidzo
Chirongwa cheChamupupuri Inoita whirlpool munzira iyoyo
Chimwe chinhu, iWarp inokutendera kuti ushande zvese nenzira yeBilinear kana kuita kuwanda kwekushandura, zvakare kusanganisira mukana wekugadzira kuteedzana kwemifananidzo (akati wandei matemba atinogona kushandisa kugadzira iyo GIF yefaira rekupopota).
Kugadzira iro Rinosimudzira Bhomba
Izwi rekuti "Sexy Pombi"Isu tave tichichiteerera kubva panguva yaMarilyn Monroe uye zvinoratidza muenzaniso wekunaka, kuti tigadzire yedu yega bhomba rekunakidza isu tinoshandura mufananidzo weiyo modhi, nekuti izvo tinovhura iyo GIMP uye kurongedza mufananidzo wepasi, semuenzaniso :
Kana chifananidzo changotakurwa muGIMP, ini ndinowanzo dhindisa iyo dura (Shift + Ctrl + D) asi kana iwe uchida iwe unogona kushanda pane imwechete base mufananidzo. Isu tinovhura iyo firita kubva kumenyu Mafirita / Zvinokanganisa / iWarp sezvatinoona mumufananidzo:
Iyo firita interface inotakurwa, iyo inopa sarudzo dzataurwa pamusoro apa:
Mushure mekurodha interface tinofanirwa kuenda tichitamba nezvinhu zvatiri kuda kugadzirisa, kuitira "kuenda pamusoro" zvine chekuita neshanduro yatinogona kushandisa sarudzo Bvisa izvo zvinotibvumidza kubvisa zvigadziriso zvatinoita kana kana iwe uchida kushandisa bhatani Kutangazve.
Tinogona kugadzira maratidziro akati wandei, imwe neimwe iine zvigadziriso, ndiko kuti: rukoko rwechiuno, rumwe ruoko, rwezvipfuva, nezvimwewo, nenzira iyi kana uchizoda kugadzirisa chimwe chikamu zvakare, waizoda zviite pasina kukanganisa zvakasara
Zvishoma nezvishoma tinenge tichigadzira muviri webhomba redu rinoshamisira kusvikira tachinja gonye kuita butterfly. Pano ini ndinokusiira iwe kuti yangu yaive sei, kwete usina kutanga wakubvunza kuti uzviedze wega muGIMP uye utaure pano ako maonero kana kusahadzika.
Sezvauri kuona, kugadzirisa foto uye kushandura mumwe munhu kuita mumwe zvinoita sezviri nyore ... hongu, kuti kana tichiona munhu iyeye uye toona kuti pikicha yaive nhema yakaipa ... LOL! 😀
Zvakanaka, hapana chimwezve chekuwedzera, ingotenda Hyuuga nemupiro wake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chigadzirwa » Kutamba neGimp: Kugadzira Bhora Rinosekesa
zvimwe zvinodya zvine hutano uye zvishoma gimp XD
Kazhinji kacho kudya zvine hutano hakusi iko kunonyanya kukosha, ndiwo maitiro ... physiology yemunhu. Ndinozviziva kutanga ruoko 🙂
hapana munhu ane chiuno ichocho, imo nekuda kwemaatomu, kana kudya zvine hutano kusingaendi, unofanirwa kurovedza muviri xd
Ndinobvumirana newe! … Maita basa.
Saka ini ndinotevera angu eGimp dzidziso, ini ndinotsvaga mifananidzo inokanganisa kana vakadzi vane muviri wakakura uye ini ndinotanga kudzorera, kugadzirisa, nezvimwe ...
Zvirinani kushanda nemamesi, nekuti ivo vanopa kurudziro uye chishuwo chekuenderera, nemapurojekiti kuitira kushandisa mativi zvinhu kana machubhu, nezvimwe, kunze kwekushoma.
Ini ndinomanikidzwa kukuudza, asi chinyorwa chinyowani maziso xD. Pasina mhirizhonga, ndinoda zvese zvawatumira uye pamwe naElav iwe unoratidzika kwandiri kunge akanakisa eDesdeLinux (peji, iro nenzira, ndinoyemura).
Pindura kune ddseda
murume chauvinist? Ndokumbira utsanangure 🙂
Handifunge kuti ndakadzikisira vakadzi nemazwi angu, kure nazvo. Nenzira, izwi rekuti "sexy bombshell" harina kubva kwandiri, saka munyori wepositi (Hyuuga) aida ku'tsanangura ', ini ndinongogovana dzidziso yaakanditumira neemail.
Ndokumbira utsanangure zvishoma nezve iyo posvo iri zvishoma maziso ^ - ^
Ndatenda zvikuru nezvamunotaura nezve zvinyorwa zvangu uye saiti, ndinonyatsoita.
Ini ndinoda iyo "pamberi" kupfuura iyo "mushure." Dzidziso yakanaka
Pindura kuna Charly_Sunday
Zvakanaka ini ndinongoti musikana wangu ndiye akanyanya 'epamberi' pane 'mushure' 😀
Nekuti ndizvo zvatiri…. saka ini ndiri wepamberi kupfuura mushure…. svetuka
Ah mai vangu ..
Ini ndinodawo izvo zvisati zvaitika, ndinoda pekubata
Ini ndinogovana. Iyo yekutanga yakanaka kwazvo uye yakasikwa. Icho chimwe chigadzirwa (kunze kweizvozvo hupamhi hwegumbo rega hwakaenzana nechiuno xD)
Hazvingave zvakashata kana ikava yemafashoni kutaura kuti "Mufananidzo uyo wakanyanyonakisa" pane kuti "Mufananidzo iwoyo wakanyanya Photoshoped" 😉
Hapana murume, zvinoita sekunge vakasunga bhandi kwaari.
Tarisa maoko nemakumbo, hazvifanane.
Zvakanaka, ndinofungidzira kuti iwe unogona kuisa iyo firita zvakare munzvimbo idzodzo kana kwete? 🙂
Ndinoifarira zvirinani pasina "kuchema." Mumwe mubvunzo, izvi zvinogona zvakare kushanda kune varume vaida kuona nhengo yavo yakakura? Ini ndinobvunza izvi nekuti ndinoziva kuti vazhinji vanoverenga havasi kuzoshinga kuvabvunza, saka kune imi mose: HAPANA!
Honestly no idea hahahahaha, ndaseka kuseka nekutaura kwako hahahaha
Zvikuru! , Hazvigoneke, ini ndaizotakudza iyo GIMP! , hehehehe.
uye heino komendi yegore hahahaha
Kana ichishanda, ndinoda imwe yakafanana naJohn Holmes.
uh hongu hongu ... 'kune vamwe' hongu 'vamwe'
aaaaaaaaajjajajajajajajajaj chii mudzidzisi hahahahahajaajjaja
Ndakaita bvunzo, ndakatora pikicha yenzvimbo iri kubvunzwa, uye mhedzisiro:
ndakamhanya kunze kwe RAM uye ndikabuda muSAP. iri Gimp "yakaturikwa" nekuti haigone kubata mapikisheni mazhinji akadaro ehunhu hwangu ...
kutaura kunoshamisa kwazvo kubva kuna Desdelinux XD
Wobva wakanganwa, kana iine masendimita mashanu inodonha zvirinani kwete.
hahaha yakanaka uye yakajairwa mhinduro ..
Chembere yakanaka ... ndinoreva, chinyorwa ...
Olecram Onaroval akadaro
Kutenda tuto !!!
Nezve mukadzi ... Ini ndinochengeta iyo yekutanga vhezheni hupenyu hwangu hwese 🙂
Pindura kuna Olecram Onaroval
Ini ndinogara nekugunun'una hupenyu hwangu hwese xdd, sezvinei ndingadai ndakaisa mamwe mashoma masendimita echipfuva
Ndakafarira iyi firita xD yakanaka kuona zvinhu zvitsva nekuti inogona kubatsira gare gare kune chimwe chirongwa, pese pandinofarira GNU / Linux zvakanyanya 😀 ndatenda nebasa rako, iri peji rakanaka.
Nenzira yandakaedza kuzviita 😀 nekuti ini ndakagara zvakanyanya kana zvishoma asi nekuda kwekudzidzisa kwako ndainzwisisa mushe kushandisa kwechishandiso ichi. Pano ini ndinosiya mufananidzo wangu.
tsamba yakamiswa akadaro
gadzirira…. ikozvino kana achitaridzika semuchinjikwa ...
Pindura tsamba yakamiswa
Handizive, asi mufananidzo wacho haugone kuitika ...
Iyo Gimp inogona kuita zvinhu zvakawanda
Ichokwadi kuti ndeyemaziso nekuti yakavakirwa pane chaiyo runako, izvo vanoverengeka vedu pano vasingagovane.
Pindura kuna cello
Musikana asingazeze ari panjodzi huru yechirwere chemoyo.
Hapana dambudziko kwandiri, ini ndinovada ivo chubby hehe
Ndeipi chaiyo? Kwandiri ivo vese vari vaviri vane hukasha haha.
Pindura kune roquejose
Uye maoko shamwari, chiuno icho hachiendi nemaoko iwayo heh
Unoda zvakanyanya kushata maitiro mazhinji.
Daaale kutaura .. !!! ingori muenzaniso hapasisina ..
Asi pane chokwadi chechokwadi: iyo gorditas inopa mumvuri muzhizha, uye kupisa munguva yechando.
Inotaridzika zvirinani pasina kudzokorodza !! Ndinoda vakomana vane hukasha vane hunyanzvi <3: 3
Pindura kune userdeb@gmai.com
Zvakanaka, kune "gorditas" anotaridzika kwazvo ...
Asi kana mumufananidzo wekutanga musikana atove bhomba, haadi chero kubatwazve
Murume, kupfuura sexy ini ndinomuona akaremara. Zvinoita sekunge anga akapfeka rimwe remakorsets ezana ramakore rechiXNUMX kwemakore.
Kuongorora kumberi uye shure kweichi chinyorwa: Ini ndinochengeta yakajairwa iyo !! Inotaridza seksikäs uye inonaka….
Chiuno chechipiri ndechekunyepedzera zvekuti zvinoratidza kuti mufananidzo wese waifanirwa kudzokororwa kuti upfuure kunge mutete 'chaiwo'
Mini Dzidziso: Kugadzira Applets yeCinnamon